Lego Batman 76240 Batmobile Tumbler ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ၂၀၁၄ မှမင်္ဂလာပါ
Lego Batman 76240 Batmobile Tumbler ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
08 / 10 / 2021 22 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 431 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal, 76023 အဆိုပါ Tumbler, ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, Aaron Eckh ပါart, Anne Hathaway, Batman, Batmobile, Catwoman, Christian Bale, ခရစ္စတိုဖာ Nolan, Cillian Murphy, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Heath လယ်ဂျာ, Jesper Nielsen, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, Lego DC က, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO.com, Michael keaton, reviews, Scarecrow, The Dark Knight ဟာ, The Dark Knight ဟာ Rises, အဆိုပါ LEGO Group, tumbler, နှစ်မျက်နှာ
Lego Batman 76240 Batmobile Tumbler The Dark Knight အတွက်လွဲချော်နေသောအခွင့်အရေးများအကြောင်းဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ဒီဇိုင်းဘာသာစကားတွင်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အမြစ်တွယ်နေသော ၂၀၂၁ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။
76240 Batmobile Tumbler၏လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်သည် ၀ င်ခွင့်တစ်ခုနှင့်ဖွင့်သည် Lego Super Heroes Creative Lead Jesper Nielsen: "ငါတို့ကအပေးအယူတွေလုပ်ရမယ် ... ငါတို့ကစတီယာရင်ကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကပိုမိုက်တဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဆိုလိုလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကငါတို့ဆန္ဒမပါဘဲအနစ်နာခံခဲ့တာဘဲ။ "
Startမည်သည့်အရာကိုမဆိုအသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့်တည်ဆောက်သည် မ ထည့်သွင်းမှုသည်မရေရာဟုခံစားရသော်လည်းဤနေရာတွင်တည်ဆောက်သူတိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်မှာအတော်လေးပညာရှိသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် 76023 အဆိုပါ Tumbler: အနှစ်သာရအားဖြင့်ဒါကအခြေခံအားဖြင့်အတူတူပါပဲ။
မင်းက 2014 ဗားရှင်းမိတ္တူကိုပိုင်ဆိုင်သေးလားဆိုတာမင်းသိဖို့တကယ်လိုအပ်တာဘဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမင်းအစားထိုးထားတဲ့ Bat-tank နဲ့မင်းရဲ့ပထမဆုံး rodeo ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 76240 Batmobile Tumbler Bat-credit card အတွက်ရိုက်ရကျိုးနပ်လား။
theme: Lego Batman အမည်သတ်မှတ်မည် - 76240 Batmobile Tumbler ဖြန့်ချိ: နိုဝင်ဘာလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 209.99 / $ 229.99 / € 229.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,049 အသေးစားပုံများ: 2
Lego: နိုဝင်ဘာလ 1, 2021
သေတ္တာထဲမှယိုထွက်လာသောနောက်တာယာအသစ်စက်စက် (ငါတို့အားသင်ကဲ့သို့ထောက်ပံ့ပေးသောမည်သည့်အသစ်မဆိုအကြောင်းအရာအားလုံးကိုညွှန်ပြပါ Lego ကျမ်းပိုဒ်ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းသင်၏အဆောက်အ ဦး မျက်နှာပြင်သို့တင်ပါ 76240 Batmobile Tumbler ချက်ချင်းဆိုသလိုဘဲ၊ သူတို့ကလုံးဝဧရာမမို့၊ ဒီသားရဲအတွက်မင်းဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲဆိုတာကိုအခိုင်အမာညွှန်ပြပါတယ်။
အကြောင်းမှာ၎င်း၏စစ်မှန်သောအရွယ်အစားကိုအပြည့်အ ၀ ကိုင်တွယ်ရန်ကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ 76023 The Tumbler နှင့်တူသည် - ဒီခရီးတစ်လျှောက်ခြေလှမ်းတိုင်းလိုလိုမှာခေါင်းကိုက်စေတဲ့စကားစု 76240 Batmobile Tumbler ၎င်းသည်အလွန်တင်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ '1' ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသောအိတ်လေးလုံးရှိသော်လည်းရှစ်လုံးမှ ၁၁ လုံးအထိပါသောအိတ်များအတွက်တစ်ခုစီသာရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ထည်အများစုကိုထိုအစောပိုင်းအဆင့်များမှတဆင့်စုဝေးစေခဲ့ပြီး Tundler ၏ထက်မြက်သောရက်စက်သောကိုယ်ထည်ကိုဖမ်းရန်တည်ဆောက်ပုံ၏နောက်ဘက်ကိုထားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၄ တွင်ထူးဆန်းသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဤနေရာ၌ထူးဆန်းသည်။ မဆိုးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတယ်။
76240 Batmobile Tumbler.
၎င်းကိုမည်သို့ထင်ဟပ်စေသနည်း 76240 Batmobile Tumbler 76023 The Tumbler ကဲ့သို့အတိအကျနီးပါးအတူတကွလာသည် (ထိုဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ ဒီမှာ) ့။ မင်းကမူလအစုံကိုတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအသစ်ကတော်တော်ရင်းနှီးသွားလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအချို့ရဲ့အရောင်တွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီး၊ အသေးစိတ်အချို့ကိုအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ချက်တွေရှိပါတယ်။ သို့သော်ကျယ်ပြန့်သောလေဖြတ်ခြင်းအားလုံးသည် ၂၀၁၄ တွင်အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။
76023 The Tumbler ကဲ့သို့တူညီသောယာဉ်နီးပါးကိုပို့ဆောင်ရာတွင်ဤဗားရှင်းအသစ်သည်တူညီသောအမှားကိုပြုလုပ်သည် ၁၀၁၈၉ Taj Mahal: ဒီ set ရဲ့ရက်စွဲတည်ဆောက်နည်းစနစ်များနှင့်အနုပညာတို့ကဘယ်တုန်းကမှမတည်ခဲ့ဘူး Lego အုပ်စုသည်၎င်း၏မူရင်းဖြန့်ချိပြီးကိုးနှစ်အကြာ ၂၀၁၇ တွင်၎င်းကိုစင်ပေါ်သို့ပြန်ယူလာပြီး ၂၀၂၁ တွင်ပိုမိုကြီးသော Batmobile မှအနည်းငယ်ပိုပျော်စရာကောင်းသည်ဟုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
အဲဒီအစား, 76240 Batmobile Tumbler အစွန်းအထင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဘောင်တွင်ကပ်ထားသောထိုအစုအဝေးများသည်အများအားဖြင့်ပန်းကန်များနှင့်အုတ်များဖြင့်ရိုးရှင်းစွာစုပုံထားသော်လည်း၎င်းတို့ကိုပူးတွဲခြင်းသည်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာအဲဒါကစိတ်ပျက်ဖို့စိန်ခေါ်မှုကနေမျဉ်းကိုဖြတ်သွားတယ်artနောက်ဘီးများတွင် icularly သည်မှန်ကန်စွာညှိရန်စစ်မှန်သောဇွဲနှင့်စိတ်ရှည်မှုကိုယူသည်။
ရှေ့တာယာနှစ်လုံးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာမဟုတ်၊ ၎င်းတို့ကိုညွှန်ပြရန်နေရာအနည်းငယ်သာထားရှိရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုခေါ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ရေတွက်ထားသောအိတ်များ၏ထက်ဝက်ခန့်တွင်ဖြစ်ပျက်သည် (သို့သော်တည်ဆောက်မှု၏တစ်ခြမ်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်ရှေ့သို့တင်သောပုံကိုမှတ်မိသည်) ၎င်းသည်သင်ထည့်သွင်းသည့်အချိန်၌စိတ်ကိုအချဉ်ပေါက်စေသောကံဆိုးစေသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်။ အဲဒီ panel တွေ
အဆုံးမှာတော့မင်းကပိုက်ဆံအများကြီးပေးပြီးပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သောအခါမှကောင်းတဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ဘူး။ Lego သတ်မှတ် မင်းမှာ ၇၆၀၂၃ The Tumbler ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုရင်၊ အဲဒါကမင်းအခုနှစ်ကြိမ်ကြုံဖူးတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အချောထည်မော်ဒယ်နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်တွေကတကယ်ကိုနည်းပါတယ်။
ရှေ့ခြမ်းပြားများပတ်လည်တွင်ပုံသဏ္toန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိသည်၊ ရှေ့ဘက်ရှိဆင်ခြေလျှောများကို (သနားကြင်နာစွာပုံနှိပ်ထားသော) ပြတင်းပေါက်ဖြင့်အစားထိုးထားသည်၊ လေယာဉ်မှူးလေကာမှန်များသည်ယခုအခါကြည်လင်မှုအစားမီးခိုးငွေ့များဖြစ်သည်။ မရ။ Tumblers နှစ်ခုလုံးကိုဘေးချင်းယှဉ်နေရာချခြင်းသည်အလွန်တိုတောင်းပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာမရှိသောခြားနားချက်ကိုပြသစေသည်။ ဒါပေမယ့်အတွင်းပိုင်းလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ အတွင်းပိုင်းမှာလည်း လမ်းညွှန်ချက်များသည်အဆိုးဆုံး (စတီယာရင်မပါ) အတွက်သင့်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည် 76240 Batmobile Tumbler ၂၀၂၁ တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှလုံးဝမပါဘဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ 76023 The Tumbler ကိုငါတို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်အခန်းမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်လိုက်သောပုံစံသည်တစ် ဦး အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်ဟုခံစားရသည် Lego ဒီအရွယ်အစားအစုံ၊ ဒါပေမယ့် 76240 Batmobile Tumbler ဖယ်ရှားနိုင်သောပန်းကန်ပြားနှစ်စုံတွင်တစ်ဖန်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာစက်ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံး၊ နှင့်တိုးချဲ့ခြင်း၊ စရိုက်လက္ခဏာများစွာ၏ BatmanTumbler ခွက်မပါသေးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအသစ်ထွက်မော်ဒယ်ကသူ့အရင်ထက် ၁၈၀ ပိုများတာမို့သူတို့ဘယ်သွားကြတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အများအားဖြင့်ပြကွက်နှစ်ခုတွင်တစ်ခု၊ minifigures အတွက်တစ်ခုနှင့် Batmobile အတွက်။
အဲဒါကထူးဆန်းတာကြောင့်ဒီ minifigure မတ်တပ်ကိုခဏလောက်ထိကြည့်ရအောင်။ ၎င်းသည်တွေ့ရှိသောနေရာများအတွက်ဖြောင့်သောပွဲဖြစ်သည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile နှင့် ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwingဒါပေမယ့်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစွပ်ထားတဲ့ gargoyles တွေဟာ Christopher Nolan's ထက် Tim Burton ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပိုလိုက်ဖက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပြောဆိုနိုင်သည်၊ ဤ Batmobiles များသည်အားလုံးအတူတကွစုဝေးထိုင်နေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရစေမည့်ထူးဆန်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tumbler အတွက်အလှည့်အပြောင်းတွင်ဖိနပ်စီးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကောင်းသည်။ ထဲကတစ်ခုပါ 76240 Batmobile Tumblerသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကသူ့ရဲ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းရဲ့ရန်လိုမှုနဲ့ခြိမ်းခြောက်ပုံကိုဖမ်းယူပုံမှာပါတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကအဲဒါကိုအားသွင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီးရှေ့ဘီးကိုမြှင့်တင်လိုက်တဲ့အခါအဲဒါတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ မော်တော်ယာဉ်အားလွတ်လပ်စွာလှည့်ပတ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲနေသော display option ကိုရရှိရန်လိုအပ်သောအပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်။
ညွှန်ကြားချက်မှာအကြံပေးထားတဲ့အတိုင်း display plaque ကို Batmobile ကလုံး ၀ နီးပါးဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ပါ၊ သင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အခိုက်အတန့်ကိုရပ်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအချီ မှစ၍ Tumbler သို့တစ်ခုတည်းသောအစစ်အမှန်အပြင်အရာသည်ရှက်စရာကောင်းသည်။
ချီးမွမ်းရမယ့်နေရာတစ်ခုရှိရင် 76240 Batmobile Tumbler၎င်းသည်၎င်း၏အလှအပ၌ရှိသည်၊ ၎င်းသည် p ကိုလုံးဝကြည့်သည်artဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့ရှေ့ကလည်းဒီလိုပါပဲ၊ ဒါကအခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့တည်ဆောက်မှုပါartment ။
ထို့အပြင်ပုံသဏ္န်သည်ပဟေဋ္ဌိအပိုင်းအစတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးကျန်အရာများသည်လုံး ၀ မယှဉ်နိုင်ပါ၊ အချောထည်ပုံစံသို့သွားရန်ခရီးသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆိုပျက်ကွက်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ တည်ဆောက်မှုများစွာကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သော (တီထွင်လျှင်) ဆက်သွယ်မှုအချက်များမှတဆင့်နေရာယူထားသည်၊ ၎င်းသည်သင်မည်သည့်နေရာသို့မျှမရွေ့ချင်ပေ။
ဤအရာများအားလုံးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကအလွန်ကြီးစွာသော Batmobile တွင်မရှိခဲ့သည့်ပြဿနာများဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ တွင်မဖြစ်သင့်ပေ။
76023 The Tumbler ကဲ့သို့စကားစုတစ်ခုရှိသည်။ 76240 Batmobile Tumbler minifigures နှစ်ခုပါဝင်သည်၊ Batman နှင့် Joker သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကဒီဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ်စားပြုနေပေမဲ့သူတို့က ၂၀၁၄ မှာကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလိုပဲမှီဝဲသလိုခံစားရတယ်။
As ဤတူညီသော minifigures များ၏စိတ်ကြိုက်ဗားရှင်းများ Christian Bale's အတွက်အထူးစောင်ကိုငါတို့ပြပြီးပြီ Batman မှန်ကန်သောကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ရှည်လျားသောလမ်းနှင့်သွားလိမ့်မည် Lego အဖွဲ့သည် Michael Keaton's Caped Crusader အတွက်ထုံးစံအရ ၀ တ်စုံကိုပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile နှင့် ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwingမရ။ အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်းတက်တာကိုငါတို့ဘာလို့ဒီနေရာမှာမရနိုင်ရတာလဲ။
တူညီသောသင်္ကေတအားဖြင့် Joker ၏ဆံပင်ပုံစံသည် Heath Ledger ၏ရိုင်းစိုင်းသော၊ မလှုပ်မယှက်လည်ဆံအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရာကဲ့သို့မခံစားရပေ။ ဒီလောက်ပါပဲ classic Lego DNA ကို၎င်း၊ ထူးခြားသောဆံပင်ပုံစံသည်ဤသေးငယ်သောပုံသဏ္ဌာန်ကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ ၎င်းမှမဟုတ်လျှင်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များကိုတကယ့်ကိုမွန်မြတ်သောပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်အမှတ်အသားကိုအမှန်တကယ်ထိမှန်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည်အခြား Joker ၀ တ်စုံကို ၇၆၀၂၃ သို့ The Tumbler ၌၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်ဟုခံစားရသည် Lego ဒီ minifigure တစ်ခုတည်းအတွက်တူညီတဲ့အစုံပါတဲ့အရာတွေကိုဒုတိယအခွေမှာလူတွေကိုရောင်းဖို့မျှော်လင့်တဲ့အုပ်စုလား။ (အဲဒါကိုမဖြေပါနဲ့။ )
နောက်ဆုံးတစ်ချက်က Two-Face မရှိတာဘာကြောင့်လဲ။ Cillian Murphy's Scarecrow ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdownငါတို့က Aaron Eckh နဲ့ Nolan Bat-villain တွေရဲ့စာရင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလွဲနေတယ်artHarvey Dent သည်စုဆောင်းမှုတွင်အကြီးမားဆုံးကွာဟချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Dark Knight trilogy (အလယ်မှာ Joker minifigure ကိုကြည့်ပါ) ရဲ့အလယ်ပိုင်းအခန်းတွေကို link ပေးထားပြီးဒါကငါတို့အတွက် Two-Face အသစ်ကိုယူဆောင်လာဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအစား minifigure line-up မှာဝင်ပါ 76240 Batmobile Tumbler လွဲချော်နေသောအခွင့်အလမ်းများကိုအခိုင်အမာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားသောဤဇာတ်ကြောင်း၏အခြားအခန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ Disney အခွန်နှင့် start Nolan အခွန်အကြောင်းပြောနေတယ်။ စာရေးနေချိန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile £ 10 / $ 20 / € 20 ထက်ပိုရနိုင်သည် 76240 Batmobile Tumbler၎င်းတွင်အပိုင်းပေါင်း ၁,၂၅၇ နှင့်အီးတစ်ခုပါ ၀ င်သည်xtra မင်္ဂလာပါ။
တစ်ပိုင်းချင်းစီ၏စျေးနှုန်းသည်အစအဆုံးနှင့်အဆုံးအားလုံးမဟုတ်ပေ Lego တန်ဖိုး၊ ဒါပေမယ့် sheer size နဲ့ p အတွက်art ယခင် Batmobile ၏သိပ်သည်းဆ - ၎င်း၏တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့နှင့်အတူဤအသစ်သည်ပေါင် ၂၀၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၂၉.၉၉ / € ၂၂၉.၉၉ တွင်တံခါးမှလုံးဝကျဆင်းသွားသည်။
မကြာသေးမီကအစပိုင်းမှတိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံများကဲ့သို့၎င်းသည်တတိယ p သို့လျင်မြန်စွာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်arty လက်လီရောင်းချသူများ - ထို့နောက်အလွန်စျေးလျှော့သည်။
မိတ်ဆက်စာမျက်နှာများ 76240 Batmobile Tumblerလမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်ကိုထုတ်ပြပါ Lego အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ “ ငါတို့ကမူရင်း [76023 The Tumbler] ကိုဘယ်လိုလေးစားသလဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ပြီးမြောက်တဲ့ရလဒ်ကလုံးဝလတ်ဆတ်တယ်လို့ခံစားရလား”
အဖြေသည်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့မနေနိုင်ဘဲမတ်တတ်ရပ်ပြီးတကယ်မတ်တပ်ရပ်နေသောအရာကိုမြင်သည်အထိအဖြေကို 'tweak နှင့်အသေးစိတ်ချိန်ညှိရန်' ဖြစ်ပုံရသည်။art'ဟာ။ Tumbler နှစ်ခုကိုအပြင်းအထန်လေ့လာမှသာသူတို့ကလတ်ဆတ်တဲ့အသစ်စက်စက်မော်တော်ယာဉ်ရဲ့မိနစ်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုပြသတာမို့သူတို့ဘာကိုကြည့်နေတာလဲဆိုတာကပိုဆန်းကြယ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ကတူညီတဲ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတူညီတဲ့စကေးကိုတူညီတဲ့မော်တော်ယာဉ်တည်ဆောက်တဲ့အခါသင်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ၂၀၁၄ တွင်မူလလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်ကြည့်ကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သံချပ်ကာအပြင်ဘက်ရှိချွန်ထက်သောထောင့်မှန်သမျှကိုကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူသည်။ နောက်တာယာအသစ်များသည်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ၎င်းသည် Batmobile ၏အနိမ့်၊ အားသွင်းပရိုဖိုင် (၎င်း၏ရပ်တည်မှုမရှိလျှင်) ကိုတကယ်အသံသွင်းသည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကဒီလောက်အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ခံစားနေရတာလေ နောက်ထပ်the ကြောင့်သာဆိုလျှင် Lego Super Heroes ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်အမြင့်နှင့်အတန်းကိုသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile နှင့် ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, 76240 Batmobile Tumbler ၂၀၁၄ တွင်ပိတ်မိနေသည်၊ မတိုးတက်နိုင်ပါ၊ မတိုးတက်ချင်ပါ Lego အဖွဲ့၏ပိုမိုခေတ်မီပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောတည်ဆောက်မှုများ
ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ကဒီမှာတကယ်ချို့တဲ့တာ။ အကယ်၍ သင်သည်မူလ ၂၀၁၄ စုကိုလွဲချော်ခဲ့ပါက (၂၀၁၄ တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ၂၀၁၄ minifigures များကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါနှင့်) 76240 Batmobile Tumbler Batmobiles ကြီးများကိုစုဆောင်းရန်သာလျှင်ကြီးထွားရန် punt နှင့်ထိုက်တန်သည်။ သို့သော်လည်းစျေးနှုန်းသည် Bat-fans များ မှလွဲ၍ အားလုံးကိုအကြံပေးရန်ခက်ခဲစေသည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego (မြားအပါအဝငျ 76240 Batmobile Tumblerမင်းအဲဒါကိုလှောင်ပြောင်နေသေးရင်!) ငါတို့ကိုသုံးနေတယ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Batman 76240 Batmobile Tumbler?
76023 The Tumbler ကဲ့သို့သင်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၈ နာရီကြာအောင်အတူတကွသုံးလိမ့်မည် 76240 Batmobile Tumblerမညီမညာဖြန့်ဝေထားသောအိတ်နံပါတ် ၁၁ စုံတွင်
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Batman 76240 Batmobile Tumbler?
76240 Batmobile Tumbler အပိုင်းပေါင်း ၂,၀၄၉ ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် ၁၈၀ ကျော် ၇၆၀၂၃ The Tumbler ဖြစ်သည်။ အီးအများစုသည်xtra အုတ်များသည်မော်တော်ယာဉ်နှင့် minifigures များအတွက် display stands များထဲသို့ ၀ င်သွားသည် Batman နှင့် Joker
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Batman 76240 Batmobile Tumbler?
76240 Batmobile Tumbler အလျား ၄၅ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၂၅ စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် ၁၆ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်အကြမ်းအားဖြင့် 45 The Tumbler နှင့်တူပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုစီ၌တစ်စင်တီမီတာပေးပါ။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Batman 76240 Batmobile Tumbler ကုန်ကျစရိတ်။
76240 Batmobile Tumbler အလေးချိန်မှာယူကေတွင် ၂၀၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင် ၂၂၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပ၌ ၂၂၉.၉၉ ပေါင်ရှိသည်။ အဲဒါကပေါင် ၁၀ / ဒေါ်လာ ၂၀ / ပေါင် ၂၀ ထက်နည်းတယ် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileသေးငယ်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုနှင့်အုတ်ပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော်လည်း၊
← Lego Marvel Super Heroes များကို UK ရှိ Nintendo Switch တွင်ဖြန့်ချိသည်
လုပ်ဖူးသမျှဈေးအကြီးဆုံး LEGO set များ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ →